Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa booqday qaar kamid ah Xarumaha Wasaaradaha. – PuntlandNews24
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa booqday qaar kamid ah Xarumaha Wasaaradaha.
Muqdisho, April 11, 2017—-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa kormeer shaqo ku tagey xarunta Wasaaradda Arrimaha Dibedda Soomaaliya oo sidoo kale ay dagan yihiin Wasaaradaha Caafimaadka iyo Qorshaynta. Wuxuna u guur galayay qaab howlleedka shaqo ee Wasaaradahaasi ka socda.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle Oo Magacaabay Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Kaluumeysiga